Saika hanafika teny Ampasika : jiolahy roa rotiky ny balan’ny polisy | NewsMada
Saika hanafika teny Ampasika : jiolahy roa rotiky ny balan’ny polisy
Nanakoako ny poa-basy, teny amin’ny famonoan’omby, Ampasika, ny harivan’ny asabotsy teo. Nifampitady tamin’ny alalan’ny fifampitifirana ny polisin’ny Service anti-gang (Sag) sy ny andiana jiolahy, saika hanafika mpandraharaha mpivarotra omby. Maty voatifitra ny roa lahy tamin’ireo jiolahy, saingy mbola nisy namany hafa tafaporitsaka.
Rotiky ny balan’ny polisy ireo jiolahy roa nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika nikasa hanao fanafihana teny Ampasika, ny asabotsy hariva tamin’ny 7 ora sy 30 mn. Ny polisy avy ao amin’ny kaomisaria Itaosy sy ny Sag no nifanehatra tamin’ireto jiolahy ireto. Araka ny fanazavan’ny polisy, nahazo loharanom-baovao mialoha izy ireo momba ny fisian’ireo andian-jiolahy mitondra basy mikasa hanao fanafihana patiraon’omby mipetraka eny toeram-pamonoana omby eny Ampasika. Nidina haingana teny an-toerana ireo polisy avy eny amin’ny kaomisaria Itaosy sy ny Sag. Efa niatrana teo akaikin’ilay trano hotafihina ireo jiolahy tamin’io fotoana nahatongavan’ny polisy io. Raikitra ny fifampitifirana satria niaro tena ny polisy ka lavon’ny bala ireo jiolahy. Nahitana basy vita gasy sy basy PA iray tany amin’ireto jiolahy ireto nandritra ny fisavana nataon’ny polisy. Voalaza fa mbola misy naman’ireto jiolahy ireto tafaporitsaka raha nahita ireo namany maty voatifitra.
Tsy tontosa, araka izany, ny fikasan-dratsin’ireto jiolahy ireto fa voasoroka dieny mialoha izany satria tonga ara-potoana ny polisy.
Nihorohoro ny mponina eny Ampasika…
Niaina tao anatin’ny horohoro ny ankamaroan’ireo mponina teny Ampasika na voasoroka mialoha aza ity fikasan-jiolahy hanao fanafihana mitam-piadiana ity. “Ahina ho nisy faty olona indray tety aminay raha tsy tonga haingana ny polisy”, hoy ny renim-pianakaviana iray mpivaro-kena eo Ampasika.
Fantatra tamin’ny alalan’ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy hatrany fa jiolahy nokarohin’ny polisy hatry ny ela ry zalahy ireto. Isan’ireo jiolahy mpamerin-keloka izy ireo satria nisy fotoana efa namita sazy teny am-ponja, saingy manohy ny asa ratsiny hatrany nony tafavoaka ny fonja. Nohamafisin’ny polisy hatrany fa voasoroka mialoha hatrany ireny trangana fanafihan-jiolahy ireny rehefa misy fiaraha-miasa eo amin’ny olona sy ny mpitandro filaminana amin’ny alalan’ny fanomezana loharanom-baovao ara-potoana.
Miverina indray ny tsy fandriampahalemana amin’iny manodidina an’Ampasika iny na eo aza ny ezaka ataon’ny polisy amin’ny fampandriana fahalemana ny tanàna. Mangataka ireo mponina eny Ampasika mba haverina hiasa amin’ny laoniny indray ny poste de police eny Ampasika. Nilaza ny solontenan’ireo mponina fa efa niasa ity poste de police ity teo aloha, saingy tsy fantatra mazava izay tena antony fa nikatona izy taty aoriana, araka ny fanazavan’ireo mponina. Noho izany indrindra, mangataka ny hametrahana polisy eny an-toerana ny mponina satria anisan’ny nampilamina ny tanàna teo aloha ny fisian’ireo polisy ao amin’ny poste de police eny Ampasika.
Mbola nidina nanao fanadihadiana teny Ampasika ny polisy momba ity fanafihan-jiolahy ity.
Efa eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly HJRA ny fatin’ireo jiolahy voatifitra teny Ampasika.